အက်ပဲလ် Watch ၏အမေရိကန်ရောင်းအားမှာ ၃ သန်းဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
US တွင် Apple Watch အွန်လိုင်းရောင်းချမှုသည် ၃ သန်းခန့်ရှိသည်
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင် Apple Watch ၏အွန်လိုင်းရောင်းအားသည်ရောက်ရှိနေပြီဟုခန့်မှန်းရသည် 3.039.353ပျမ်းမျှအားဖြင့် $505 ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်အထိ Apple မှနာရီပေါင်းများစွာအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်သုံးလအကြာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များအရအချပ်ထောက်လှမ်းရေး'' ။
El Apple Watch အားကစား အစောပိုင်းဖောက်သည်များအကြားလူကြိုက်အများဆုံးမော်ဒယ်တစ် ဦး ခန့်မှန်းအတူနှစ်ခုနီးပါးတ ဦး တည်းဖြစ်ခဲ့သည် ရောင်းချထားသော 1.950.909 ယူနစ် ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းမှာ 381 ဒေါ်လာ 10ပြီ ၁၀ ရက်မှ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Apple Watch သံမဏိ၏ရောင်းအားမှာခန့်မှန်းရသည် 1.086.569 ယူနစ် ၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းမှာယနေ့အထိ $695.
Apple ကလည်းရောင်းလိုက်ပြီ 1.875 Apple Watch Edition ကိုမော်ဒယ်များ ၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းမှာယနေ့အထိ $13.700Slice Intelligence ရဲ့အဆိုအရ ဒီ ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေရောင် Apple Watch ရဲ့မော်ဒယ်တွေကိုနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာတွေ့ခဲ့ရပြီး Beyonce, Drake, Kanye West, Katy Perry နဲ့ Pharrell Williams $10.000 y $17.000 ယူအက်စ်မှာ ..
''အချပ်ထောက်လှမ်းရေးသြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဟောင်ကောင်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ မက္ကဆီကို၊ Espanaဆွစ်ဇာလန်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတို့မှဝယ်ယူမှုများကိုရေတွက်ခြင်းမရှိပါ Apple ကပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရောင်းအဝယ်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
'Slice Intelligence' သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအချက်အလက်အသစ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်၌ Apple Watch ၏အွန်လိုင်းရောင်းချမှုသည်ဇွန်လတစ်လျှောက်လုံးသိသိသာသာကျဆင်းသွားကြောင်းဖော်ပြသည် ဤဆောင်ပါး ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Miguel elngel Juntos မှကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ကို၎င်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်စစ်တမ်းအရ US Apple Watch အွန်လိုင်းအရောင်းသည်ပုံမှန်တွင်ရှိခဲ့သည် တစ်နေ့လျှင် Apple Watch ၂၀၀၀၀ထက်လျော့နည်းကျသွားမတိုင်မီမေလတစ်လျှောက်လုံး တစ်ရက်လျှင် 10.000 ပြီးခဲ့သည့်လက။
Apple Watch နဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသူနဲ့ချိန်းတွေ့တာကိုငါတို့တွေ့ပြီလား ပန်းသီးညှပ်? သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ ?။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » US တွင် Apple Watch အွန်လိုင်းရောင်းချမှုသည် ၃ သန်းခန့်ရှိသည်
ကြီးမားသောဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည် HealthKit အား၎င်းတို့၏ R&D တွင်ဆေးဝါးများအတွက်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားသည်
Apple Pay ကိုယူကေတွင်ရနိုင်သည်